Jiri Mbupụ si n'igwe iji chekwaa Editing foto
Ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na Lightroom, ị nwere ike ịchọ iwu nchekwa, dị ka ị na-eji site na nghazi software edetu. Ma Lightroom enweghị iwu nchekwa. N'ihi nke a, ndị na-eme ihe ntanetụ ọhụrụ na - ajụkarị, sị: "Olee otu m ga - esi chekwaa foto m deziri na Lightroom?"
Lightroom bụ nchịkọta na-enweghị mbibi, nke pụtara na pikselụ nke foto mbụ gị adịghị agbanwe agbanwe. A na-echekwa ihe omuma gbasara otu esi edezi faịlụ gị na teknụzụ Lightroom, nke bụ n'ezie nchekwa data n'azụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na enyere gị aka na mmasị, Mmasị> Ozuruọnụ> Gaa na Ntọala Ntọala , a ga-echekwa ntuziaka ndozi na faịlụ ha dị ka metadata , ma ọ bụ faịlụ XMP "sidecar" - faịlụ data nke na-anọdụ n'akụkụ faịlụ faịlụ .
Kama ịchekwa site na Lightroom, okwu ndị e ji mee ihe bụ "mbupụ." Site na mbupụ faịlụ gị, echekwara ihe mbụ ahụ, ma ị na-ekepụta mbipị ikpeazụ nke faịlụ ahụ, na ụdị ọkpụkpọ ọ bụla achọrọ maka atụmatụ ya.
Ebufe si na ntancha
Ị nwere ike mbupụ otu ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ site na Lightroom site na ịmepụta ma:
Ịhọrọ mbupụ site na menu menu.
Na ịpị nnukwu bọtịnụ Mbupụ bọtịnụ na ala nke akụkụ aka ekpe na usoro mmepe.
Jiri igodo nsoro Ctrl-Shift-E.
Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa na ị na-ebupụ foto gị edezi ruo mgbe ịkwesịrị iji ha na ebe ọzọ - izigara onye nbipute, bipụta na ntanetị, ma ọ bụ ọrụ na ngwa ọzọ.
Igbe Igbe Mbata, nke egosiri n'elu, adịghịkwa iche na Save Dị ka igbe maka ọtụtụ ngwa. Chee ya dị ka mbipụta gbasaa nke igbe ahụ ma ị nọ n'ụzọ gị. N'ikpeazụ, igbe igbe ntanetị Lightroom na-ajụ gị ajụjụ ole na ole:
Mbupụ Ebe: Ihe a nile na-ajụ bụ "Ebee ka ịchọrọ ka anyị tinye faịlụ ahụ?" The Export Iji gbadaa ala na-enye ọtụtụ nhọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere otu nchekwa maka onyinyo a họrọ Mbupụ gaa> Nkọwa . Pịa bọtịnụ Họrọ ma chọta ebe nchekwa ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye obere folda a ga-ajụ gị ka ị nye ya aha, emesịkwa ị jụọ gị ihe ị ga-eme na faịlụ ndị dị ugbu a.
Nchịkọta Na-akpọ: Enwere ọnụọgụgụ nhọrọ ebe a mana ihe ana-ejikarị eme bụ Aha Omenala. Abanye aha ahụ na mpaghara ederede omenala ma ị ga-ekpebi ma ọ bụrụ na ndọtị ga-abụ nnukwu ma ọ bụ obere. Nke a bụ nhọrọ onwe onye karịa ihe ọ bụla ọzọ. O nweghị mmetụta na mmepụta. Naanị maara na aha ị kenyere faịlụ ahụ ga-eji dị ka aha a na-edeghị aha maka faịlụ ọ bụla ị ga-ebupụ. Oge ọ bụla ị kụrụ ebe a, jide n'aka na ị ga-agbanwe ha.
Video: Ee ị nwere ike mbupụ vidiyo site na Lightroom. Naanị mara na e nwere naanị ụdị vidiyo abụọ: MP4 ma ọ bụ DPX. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijigide, kwuo, na .mov ma ọ bụ usoro ọzọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ Ụdị mbụ, faịlụ a na-achọghị.
Ntọala Ntọala: Nke a bụ ebe ị debere usoro faịlụ. Ụdị ndị dịnụ bụ JPEG, PSD, TIFF, DNG , na Original. Ihe dị ịrịba ama na nke a bụ PNG. Ozugbo a họọrọ usoro a, mpaghara a ga-agbanwe iji nye gị ọtụtụ nhọrọ kpọmkwem maka usoro a họọrọ.
Sizing Sizing: Mpaghara a na - ahapụ gị ka ịgbanwuo oyiyi ahụ na akụkụ na mkpebi.
Nkọwapụta Ntupụta : Ị nwere ike ịhọrọ itinye ntakịrị ihe ị gụrụ foto JPEG, PSD, ma ọ bụ TIFF mgbe ị na-ebupụ. Ọnụ ọgụgụ nke mmụgharị a na-adabere na usoro na mkpebi ị ezipụta.
Metadata: Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye nwebisiinka ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na-ahọrọ gị na mpaghara a. I nwekwara ike itinye isiokwu gị
Mmiri na-egwu mmiri: Ịnwere ike ịgbakwunye akara mmiri nwebisiinka na faịlụ JPG, PSD na TIFF. Ịnwekwara ike ịgbakwunye ihe ngosi mmiri omenala.
Usoro nhazi: Mpaghara a na - ahapụ gị ikpebi ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na eserese ma ọ bụ vidiyo.
Ọ bụrụ na ị na-ebubata faịlụ site na iji otu njirisi ahụ, ịnwere ike ịchekwa ntọala dịka Mbupu Mbupu site na ịpị bọtịnụ "Tinye" na igbe nbata.
Iji Foto nke Ego Epeepe
Tinye ihe ngosi ihe omuma na GIMP
Ndị a bụ agba ndị inyom kacha hụ n'anya
Ebee ka m nwere ike ịchọta foto ntanetị ọ bụla?
Esi eji Ngwunye foto Photoshop
Lightzone Review: Free Darkroom Software maka Windows, Mac, na Linux
Tụgharịa Foto n'ime Foto Na-akpali Na-akpali akpali
Esi eji ejiji maka chepụta ajụjụ Job
Kedu ihe bụ Ntọala POP3 Zoho?
Otu esi eme mpako na Google
Esi tinye Twitter na Safari Sidebar
Kwụsị Kwụsị Live Mail, OE si Underlining Email Addresses
Kedu nke dị mma: Flash ma ọ bụ GIF Animated?
Kedu ihe LMGTFY na Gini mere O Ji Kwesiri Iji ya?
IP: Klas, Mgbasa ozi, na Multicast
Kedu ka mmepụta anya na mmetụta pụrụ iche dị iche?
Obi na-emegharị ihe nkiri na ụlọ ahịa Pro X na Animation Shop
Kedu Agba Dị Mkpụrụ?
Ịntanetị gụgharia: Ihe Ọ bụ na otú O si arụ ọrụ
Hụ Ya! iPhone Diet & Weight Loss App Review
Esi eji ICloud Mail Keycuts na icloud.com
Lelee Ọnọdụ Outlook.com
Ihe Nlereanya Dị Irè nke Iwu Zip
Otu esi enweta GMX Mail na Gmail
Jiri Ebube Ziri Ezi ma ọ bụ Zuru Ezu Kwesịrị Ekwesị
Esi weghachite Paswọdu Windows 8
Akụkụ nke Otu Blog Na-aga nke Ọma